संक्रमण स्थिर, मृत्यु बढ्दो: कोभिडको तेस्रो लहर आउने - परिकल्पना
गृहपृष्ठ / समाचार / संक्रमण स्थिर, मृत्यु बढ्दो: कोभिडको तेस्रो लहर आउने
संक्रमण स्थिर, मृत्यु बढ्दो: कोभिडको तेस्रो लहर आउने
by परिकल्पना on July 17, 2021 in समाचार
कोभिड–१९ को दैनिक संक्रमण दरमा खासै वृद्धि नदेखिए पनि पछिल्ला दिन मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ । पछिल्लो चार दिनमा झन्डै चार गुनासम्मले मृत्यु बढेको छ । अस्पतालमा अझै पनि आईसीयू र भेन्टिलेटरमा चाप रहेकाले आगामी दिनमा पनि मृत्यु संख्या उल्लेख्य घट्न नसक्ने संकेत देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
गत मंगलबार १२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए, शुक्रबार झन्डै चार गुणा बढी ४२ जनाको मृत्यु भएको छ । ‘पछिल्लो साता दैनिक संक्रमण दरमा परिवर्तन देखिएको छैन । संक्रमण दर न बढेको छ, न त घटेकै छ । २० देखि २२ प्रतिशतकै सेरोफेरोमा छ,’ वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. राजेन्द्र बीसीले भने, ‘मृत्यु हुनेहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेकै छैन ।’ विज्ञहरूका अनुसार संक्रमण दर स्थिर हुनुमा कोभिड नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुनु हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमण दर नबढे पनि जोखिम नटरेको जनाएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले संक्रमण उस्तै रहेकाले स्वास्थ्य सावधानीमा हेलचेक्य्राइँ गर्न नहुने बताए ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का पूर्वनिर्देशक डा. जीडी ठाकुर भने परीक्षणको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको माध्यमले लक्षणसहित वा लक्षणरहितका संक्रमितको पहिचान गरी घरमै वा संस्थागत आइसोलेसनमा राख्न नसक्दा मुलुकमा संक्रमण जस्ताको तस्तै रहेको उनको विश्लेषण छ । ‘दैनिक संक्रमण दर स्थिर देखिनुमा हालसम्म कोभिड नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुनु नै हो,’ उनले भने ।
शुक्रबार ९ हजार ६ सय १३ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा २०.८६ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । बिहीबार भने पीसीआर परीक्षणमा २१.५८ प्रतिशत संक्रमित देखिएका थिए । एन्टिजेन परीक्षणबाट पनि करिब उस्तै परिणाम देखिएको छ । शुक्रबार ४ हजार ५ सय ६९ नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा २०.३५ प्रतिशत अर्थात् ९ सय ३० जनामा कोभिड पोजिटिभ देखिएको छ ।
चार दिनयता मृत्यु भएका १ सय ६ जनामध्ये बहुसंख्यक ५० वर्षमाथिका छन् । ८० प्रतिशत व्यक्ति ५० वर्षमाथिका रहेको बताउँदै डा. बीसीले २५ प्रतिशत ५० देखि ५९ वर्षका र ६० माथिका ५५ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । ‘अहिले उपत्यकामा आधाभन्दा बढी आईसीयू भरिइसकेका छन् । अहिलेदेखि नै योजना बनाएर निजी क्षेत्रको आईसीयूको उपलब्धता सुनिश्चित नगरे अवस्था झन् जटिल बन्नेछ,’ उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार हाल देशभरिमा २६ हजार ८ सय २७ जना अर्थात् ४.०२ प्रतिशत सक्रिय संक्रमित छन् । हुम्लामा ९ र रुकुम पूर्वमा ९ जना गरी एक अंकमा सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्ला दुईवटा मात्र छन् । हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्ला ८ वटा छन् । झापामा १ हजार ३ सय ८०, मोरङमा १ हजार ४ सय ७४, सुनसरीमा १ हजार २ सय ७०, चितवनमा १ हजार २ सय २९ र कास्कीमा १ हजार ४ सय ७२ जना सक्रिय संक्रमित छन् । काठमाडौंमा ५ हजार ४ सय ४३, भक्तपुरमा १ हजार ४५, ललितपुरमा १ हजार १ सय ३१ जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
यसैबीच, विज्ञहरूले कडाइका साथ स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाए दसैंताका कोभिडको तेस्रो लहर आउने सम्भावना रहेको दाबी गरेका छन् । ‘नेपाल र अन्य मुलुकमा देखिएका विभिन्न सूचकले कोभिडको तेस्रो लहर दसैंताका आउन सक्ने देखाएको छ,’ डा. बीसी भन्छन्, ‘तेस्रो लहर आउन नदिन सरकार र निजी स्वास्थ्य संरचना तम्तयार भएर बस्नुपर्छ ।’ प्रभावकारी खोप कार्यक्रम र जनस्वास्थ्यको उपयुक्त मापदण्ड सञ्चालनमा उनले जोड दिए । विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एड्हानोमले बुधबार आपत्कालीन समितिलाई सम्बोधन गर्दै कोभिडको तेस्रो लहरको प्रारम्भिक संकेत आउन थालेको बताएका थिए । विश्व तेस्रो लहरको प्रारम्भिक चरणमा रहेको जनाउँदै उनले चार सातादेखि विश्वमा कोभिड संक्रमण बढेको उल्लेख गरेका थिए ।
चीनले थप १६ लाख डोज खोप अनुदानमा दिने
चीनले नेपाललाई थप १६ लाख डोज भेरोसेल खोप अनुदानमा दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिन शुक्रबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास पुगेकी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् । चीन सरकारको निर्णयअनुसार नेपाललाई थप १६ लाख खोप डोज सहयोग गर्न लागिएको यान्छीले जानकारी गराएको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । देउवासँगको भेटमा राजदूत होउले नेपाललाई महामारीको दौरान खोप सहयोग गरेर सहयोग गरिरहने बताएकी थिइन् ।
चीनले यसअघि पनि नेपाललाई दुईपटक गरेर १८ लाख खोप सहयोग गरिसकेको छ । योसँगै नेपालमा चीनबाट अनुदानमा मात्र ३४ लाख खोप भित्रिनेछ । यसअघिको १८ लाख खोप आएर पनि नेपाली जनताले लगाइरहेका छन् । यस्तै, नेपालले चीनबाट ४० लाख खोप खरिद गरेर ल्याउने प्रक्रियामा छ । योसँगै नेपाललाई सबैभन्दा बढी खोप सहयोग गर्ने मुलुक भएको छ । नेपाललाई यसअघि भारतले ११ लाख अनुदानमा सहयोग गरेको थियो भने २० लाख खरिद गरेकामा १० लाख खोप मात्र हालसम्म दिएको छ ।
अमेरिकाले भने नेपाललाई १५ लाख ३० हजार जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप दिइसकेको छ । जापानले पनि नेपाललाई १६ लाख अस्ट्राजेनेका खोप दिने वाचा गरिसकेको छ । उक्त खोप नेपाल आइपुग्न बाँकी छ । त्यसबाहेक नेपालले ३ लाख ४८ हजार खोप कोभ्याक्सको सुविधामार्फत प्राप्त गरेको थियो ।
विधा # समाचार
✍️ परिकल्पना at July 17, 2021
[MCC] एमसीसी विवाद : कारण र विकल्प
यो हप्ताको मौसम काठमाडौँ
कसरी पढ्ने, पढेको कुरा कसरी बुझ्ने र सम्झिने
पुस्तक वा लेखमा लेखिएका कुराको ज्ञान तथा बोध हुने गरी अध्ययन गर्नु,अभ्यास गर्नु,घोक्नु पढ्नु हो भने पढेका कुरालाई जीवनमा रचनात्मक तरिकाले ला...
आज चुरोट खान भनेर क्याफे छिरेको थ्ये, ३-४ जना केटिहरु चुरोट तान्दै रैछ्न। छ्या!!! खत्तम भै सकेछ्न आजकलका केटिहरु.. अस्ति राती साथीहरु संग ...
जोन्सन एण्ड जोन्सन भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ, कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छन्?
जोन्सन एण्ड जोन्सनको कोभिड भ्याक्सिन (जानसेन कोभिड-१९ भ्याक्सिन) नेपालमा पहिलो पटक प्रयोग हुन लागेको छ। यसको प्रयोगलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्...
लामो समयदेखि घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको शक्तिशाली मुलुकसँगको अनुदान सम्झौता गिजोलिनुमा हाम्रो राज्यसंयन्त्रको कार्यशैली मूल रूपमा जिम्मेवार छ । ✍...
मापदण्डविपरीत दाहाललाई थप सुरक्षाकर्मी
काठमाडौ, सरकारले मापदण्डविपरीत पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका लागि सुरक्षाकर्मी थपेको छ । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बने...
माधव नेपालको अर्को सर्त; दश बुँदे सम्झौता संशोधन नगरी मान्न सकिन्न
काठमाडौं, माधवकुमार नेपालको अरुचीका बीच असार २७ गते राति एमाले वार्ता टोलीले गरेको १० बुँदे सम्झौता जस्ताको त्यस्तै स्वीकार नगर्न नेपालमाथि ...
काठमाण्डाै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजै विश्वासको मत लिने हुनु भएको छ । पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको आज बस्ने पहिलो बैठकमै उहाँले विश...
अभिलेख May 2021 (13) June 2021 (46) July 2021 (32)
बिज्ञापनको लागि सम्पर्क - ९८५७६२१९२० / 9857621920 - Email:- digitalparikalpanaa@gmail.com
Copyright (c) 2021 Parikalpana
Design by:Ramji Acharya